Mozambika: Fodian’ireo Mpianatra Voaroaka Avy Any Sodana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2012 8:38 GMT
(Rohy mankany amin'ny fiteny Portigey) Dimy tamin'ireo mpianatra telopolo nisoratra hahazo vatsim-pianarana ao amin'ny Anjerimanontolo Iraisampirenen'i Sodana izay, tany akaikin'ny faran'ny Aprily, no nanasonia fitarainana iray teny anatin'ireo tambajotra sosialy, mikasika ny olana ara-bola sy sosialy atrehan-dry zareo ao amin'ity firenena mampiantrano an-dry zareo ity, ary efa tafaverina any Mozambika.
Ao anatin'ilay taratasy, navoaka ny 27 Aprily tao amin'ny pejy Facebook “Mozambicains du Soudan” na Ireo Mozambikana ao Sodana, ireo mpianatra, nalefan'ireo fikambanana islamika ho any Sodana, dia toa nangataka ny fidirana an-tsehatry ny governemanta hamahàna ny olany izay faritana ho toy ny “faran'izay ratsy”:
Tsy fahampian'ny vola handoavana ny fahazoan-dàlana ‘visas’, ny saram-pianarana samihafa, ny fitaovam-pianarana ary ny fikarakaram-batana ho an'ny tsirairay, ny fiahiana ara-pahasalamana, ary tsy adino ny karazan-tsakafo zara raha misy, indrindra fa ireto mpianatra ireto dia tsy manana afa-tsy karazany iray ihany ao anatin'ny lisitra, ny voalohan'ny janoary ka hatramin'ny 31 Desambra, vary sy carry hafahafa be ihany ( vomanga sy voatavo).
Tranombokin'ny Anjerimanontolon'i Khartoum, Sodana. Sary: Book Aid International ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Ny “tabataba” naterak'ilay fitarainana teny anivon'ny fampahalalam-baovao Mozambikana sy ny tambajotra sosialy dia nahatonga ny Anjerimanontolo hanao tsindry tamin'ireo mpanao sonia mba hameno antontan-taratasy iray vaovao hiverenan'izy ireo amin'ny fanambarany . Ireo mpianatra tsy nanaiky hilefitra tamin'ilay tsindrin'ny Sodane dia noroahan'ilay anjerimanontolo ary naverina nody any Mozambika tamin'ny 29 jona.
Mpianatra voaroaka avy any Sodana. Sary: Víctor Bulande (fampiasàna nahazoana alàlana)
Rehefa niandry nandritra ny ora fito tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Maputo, dia noraisina sy nampiantranoin'ny Parlement Juvénile (PJ) ry zareo, Fikambanana iray tsy miankina amin'ny Fanjakana, izay niova ho ny endrika hita mason'ny fanohanana ireo mpianatra mozambikana. Nandritra ny tafatafa ho an'ny mpanao gazety natao tao amin'ny foiben'ny PJ, navoitran'ireo mpianatra ihany koa ny mety ho fisian'ny fifandraisan”ny raharaha amin'ny Al-Qaida.
Eny anaty tambajotra sosialy, marobe ireo kiana mikasika ny tsy fihazakazahan'ny governemanta mozambikana tamin'ny famahàna ny olana. Ny minisitry ny fampianarana, Zeferino Martins, dia nanamafy fa ‘tsy manana andraikitra, na kely aza amin'ireo mpianatra nahazo vatsim-pianarana niaina tany Sodana ireo’ ny governemanta, indrindra fa hoe ireto tanora mozambikana ireto dia fikambanana islamika no nandefa azy tany mba hanatrarana tanjona ara-pinoana”.
Tamin'ny alàlana olona mpanelanelana manana fifandraisana amin'ireo fikambanana ara-pivavahana miozolmana misy ao Mozambika no nandefasana ireny mpianatra ireny tany Sodana, indrindra fa ao Maputo. Araka ny Minisitry ny Fanabeazana, nandray sarintsarim-panampiana avy aminà fikambanana iray antsoina hoe Sautul Islam ireo mpianatra.
Na eo aza izany, ny bilaogin'ny Ligue des ONGs du Mozambique (Fikambanan'ireo ONG ao Mozambika) dia namoaka lahatsoratra iray nanindriany fa tokony ho naka fepetra ny governemanta:
Ndeha ary ho ekentsika hoe tratry ny fanenàna fandaniana ara-bola ireo mpianatra, zava-dehibe araka izany ny fifampiresahana [ny governemantal] amin'izy irei sy fanampiana azy ireo hahita vahaolana afaka mba hanamaivana ny fijalian-dry zareo.
Ary ampiany hoe :
ity toe-javatra ity dia mety hisarika ny saina any amin'ny fanovàna na famerenana mandinika indray ny politikam-pitantanana mifandray amin'ny fanomezana vatsim-pianarana sy ny fepetra mifanaraka takiana amin'izany.
Tsy vaovao ny tranga tahaka azy ity, toy ny ampahatsiahivan'ny mozambikana iray mpianatra tsy nitonona anarana ao Vietnam, ao anatin'ny fanehoan-kevitra iray amin'ny lahatsoratry ny journal@Verdade, malahelo amin'ny “zavatra iainan'ireo mmpianatra ao Sodana, tohin'ny mahazo ireo any Alzeria zsy Rosia”. Ao anaty lahatsoratra iray hafa dia manamarika i Carlos Cantinho hoe :
ireo nahazo vatsim-pianarana any Alzeria dia mitaky izay nampanantenaina an-dry zareo (ny fampodiana azy ireo an-tanindrazana) tahaka ireo any Sodana izay tafiditra ao anatin'ireo firenena faran'izay mahantra indrindra, ary miteny fa tsy misy ifandraisan-dry zareo amin'ny ministeran'ny fanabeazana mihitsy, fa kosa amin'ireo fikambanana islamika malaza (madrassas). Any amin'ireo firenena mandroso rehefa mametraka ireny fifanekem-piaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny fampianarana ireny (dia hajaina izany). Raha izay mba fantatra, tsy misy, hatramin'ny anio, olona nandray ny andraikiny.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Rui Lamarques (@LamarquesRui).